Ukutya kweArtichoke-Uyenza njani inyathelo lokutya ngenyathelo! | Ukutya kukaNutri
Ukutya kwe-artichoke yenye yezona zininzi ethandwayo kwaye edumileyo Kwilizwe lethu. Isicwangciso sokulahleka kwesisindo kunye negama laso libonisa, isekwe iipropati ezininzi ze artichoke ukwenza ukuba lo mntu kuthethwa ngaye alahlekelwe uthotho kilos ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
Ukutya okudumileyo kwe-artichoke abagxeki abaninzi kunye nabameli abaninzi njengoko kusenzeka rhoqo ngolu hlobo lokutya iifowuni ezingummangaliso. Emva koko ndiza kukuxelela ngakumbi ingaba oku kutya kubandakanya ntoni, abanye be izibonelelo zayo kunye nobungozi bayo ukuze Ngale ndlela ucacile, ukuba kufanelekile okanye hayi ukuqhubeka nokutsho indlela yokuncipha ukuphelisa ikhilo eyongezelelweyo engaqhelekanga kumzobo wakho.
1 Iipropathi zokunciphisa iartichoke
2 Yintoni ukutya kwe-artichoke?
3 Yintoni onokuyitya kwisidlo seartichoke esempilweni?
Iipropathi zokunciphisa iartichoke
I-artichoke kukutya okunothotho lwe iipropathi ezigqibeleleyo ukunciphisa ubunzima kunye ukunciphisa umzimba. Ke ngoko, kubalulekile ukudibanisa le mveliso kunye nezinye iintlobo zokutya. kanye njengesondlo kwaye ke ufumane uhlobo lokutya isempilweni kwaye ilungelelene ilungele umzimba. Eyona iipropathi zokunciphisa umzimba I-artichoke zezi zilandelayo:
Yinto entle kakhulu ifayibha umthombo ke iya kukunceda ndiziva ndihluthi ngokukhawuleza kwaye ke ukuphephe ukusebenzisa iikhalori ezininzi. Ukongeza koku, i-artichoke ilungile ukulawula incindi elungileyo yamathumbu kwaye uphephe iingxaki ngokwetyiswa kokutya.
Yiyo umchamo ogqwesileyo ke inceda umzimba ukuphelisa iityhefu ezininzi kunye nokungcola kwaye kuthintela ukugcinwa kolwelo.
Kukutya kunye izondlo ezininzi kunye nekhalori ephantsi kakhulu ke ilungile ukunciphisa umzimba ngendlela esempilweni.
Ngamafutshane, i-artichoke kukutya okufanelekileyo okubandakanya ekutyeni kwemini nosuku kwaye ufumane ukutya enye indlela esempilweni engenamafutha.
Yintoni ukutya kwe-artichoke?
Isondlo esidumileyo seArtichoke malunga neentsuku ezi-3 ubuninzi kwaye ngeli xesha lifutshane kungalahleka ukuya kwi-4 kilos ubunzima. Emva kwelo xesha ngu ayinakucebisa kwaphela qhubeka nolu hlobo lokutya ukusukela ukungabikho kwezondlo ezibalulekileyo kuyo kunokubangela iingxaki zempilo ezinzulu nezinzulu. Oku kutya kusekwe ekutyeni i-artichokes ngexesha isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa nasekuseleni amanzi amaninzi ukuze ufumane coca yonke into ephilayo Ityhefu kunye nobumdaka. Ngexesha leentsuku ezi-3 zokutya kuthabatha, ungathatha ezinye iintlobo zokutya njengeemveliso zobisi olungena skim, ziqhamo, imifuno, ikarikuni kunye nerayisi emdaka.
Ngokukhuthaza ukutya ifayibha ephezulu, uya kuncipha emzimbeni iintsuku ezimbalwa kakhulu. Ngaphandle koku, ukuba ugqibe ukutya kwaye awuguquli imikhwa yakho ngexesha lesidlo, kunokwenzeka ukuba ubandezeleke isiphumo esothusayo sokwenyuka yokutya ekuthiwa ngummangaliso kwaye uyachacha iikhilogram ezininzi Kwabo baphulukene nesidlo esidumileyo seartichoke. Nanku umzekelo wento enokuba yiyo imenyu yemihla ngemihla kolu hlobo lokutya.
Ngexesha lesidlo sakusasa Unokuba nekomityi yekofu enobisi, iti okanye incindi yeziqhamo kunye nayo isilayi sesonka kunye netshizi okanye 3 cookies ezele iinkozo. Isiqingatha kusasa iyoghurti enqatyisiweyo. Ngexesha lesidlo artichokes nerayisi emdaka kunye neqhekeza leziqhamo. Ukufumana i-snack yeyogurt enesikim okanye ikofu enobisi. Ngesidlo sangokuhlwa iartichokes ezintathu ezigoliweyo Kunye nesilayi sesonka sengqolowa esipheleleyo kunye nenxalenye encinci yeskim samasi.
Yintoni onokuyitya kwisidlo seartichoke esempilweni?
Ukutya kwe-artichoke Kulula kakhulu ukulandela njengo isekelwe ikakhulu ekutyeni isixa esikhulu soku kutya ngexesha Iintsuku ezingama-3 XNUMX ukuba ukutya kuhlala. Ngale ndlela ungaluqala usuku usempilweni ijusi yemifuno apho eyona nto iphambili ekuyo I-artichoke. Ngexesha lesidlo sasemini ungayenza isitya serayisi emdaka kwaye ungeze kwii-artichokes ezifanayo. Njengokuba ubona, isitshixo solu hlobo lokutya kubandakanya ukubandakanya i-artichoke amaxesha amaninzi kangangoko kunokwenzeka kwindlela otya ngayo yemihla ngemihla.
Ukuba ufuna ukwenza ukutya okune-artichoke esempilweni onokulahlekelwa ngayo ziikhilos ngaphandle kokubeka impilo yakho emngciphekweni, kuya kufuneka ubandakanye isixa esikhulu sokutya okunesondlo okunje iziqhamo ezikumgangatho ophezulu, imifuno kunye neeproteni. Ukongeza koku, unokubandakanya ipasta okanye iimbotyi ukuthatha iintsuku ezimbalwa ngeveki. Ngale ndlela unokongeza ukutya kwi-artichoke ezinye iintsuku ezininzi kwaye awuyi kubeka impilo yakho emngciphekweni kuba imalunga ukutya okunesondlo kunye nokulinganisela. Okulandelayo ndiza kukubonisa umzekelo wemenyu onokuthi uyenze ngeartichoke njengeyona mveliso iphambili.
Ngexesha lesidlo sakusasa ungasithatha ijusi yemifuno yenziwe ngee-artichokes kunye neminye imifuno kunye nezinye ii-cookies ezipheleleyo. Ngexesha lesasa ungathatha isiqwenga sesiqhamo sendalo. Ngexesha lesidlo sasemini ungenza amabele enkukhu egcadiweyo ehamba kunye nawo isitshisi se-artichokes. I-snack ye-snack ye-snack. Isidlo sangokuhlwa isaladi eyahlukeneyo kunye i-artichoke omelette.
Ngokuqinisekileyo, ukutya kwe artichoke ngengqiqo engqongqo ucinga ingozi yokwenene kunye nomngcipheko kwimpilo yomzimba. Kuqwalaselwa njengokutya kwehypocaloric ke njengokuba iintsuku zihamba, uya kuziva ukuba buthathaka kwaye akunamandla. Ukungabikho iiprotheyini ezininzi kunye namafutha Umzimba awulungelelananga kwaphela. Ngokuchasene noko njengoko ubonile imigca embalwa apha ngasentla, kunokwenzeka ukuba uyenze uhlobo olusempilweni lokutya i-artichoke kwaye oya kuthi kwakhona ukwazi ukuphulukana noluhlu lweekhilogram. Kufuneka ufake isandla kuphela izondlo ezibaluleke ngakumbi ekutyeni okunjalo kwaye ulandele uhlobo olulunge ngakumbi lokutya.
Ukugqiba, ndiza kukubeka apha ngezantsi ividiyo echazayo Ukuze uyiqonde ngokweenkcukacha into eyiyo ukutya okwe artichoke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » ZeMpilo » Ukutya kweArtichoke
Ukutya okubangela ukudumba kwesisu
Uxinzelelo olungelolonyaka-Iziphumo ezithembisayo zoNyango oluKhanyayo oluMhlophe